I-Audi Aicon, enye indlela yokuzimela yeJamani ene-800 km yokuzimela | Iindaba zeGajethi
Icandelo leemoto liyaphila lelinye lawona maxesha akhe amnandi ezikhunjulwayo. Kwaye yonke into ibonisa ukuba kwikamva elikufuphi iya kuba ziimoto eziqhubayo; baya kuvumela abakhweli bazinze kwaye bonwabele ukukhwela. Ngale ndlela, iAudi yaseJamani iye yafuna ukufaka isandla kwisanti yayo kwaye yathatha ithuba kwiFrankfurt Motor Show ukubonisa IAudi Aicon.
Le moto yexesha elizayo kunye nemidlalo kakhulu inendawo yangaphakathi yabantu aba-4. Yintoni egqithisile, Zonke izinto eziqhelekileyo kula matyala zilahliwe: ivili lokuqhuba, iiphedali, amabhanti nayo nayiphi na imiqobo ethintela indawo. I-Audi Aicon yiteksi yeerobhothi. Ngamanye amagama, izinto ezakhiwe ngazo zikowona mgangatho uphezulu. Kwakhona, ukuyenza ibe nomtsalane ngakumbi, iivili zayo zifakwe kwiifeleni zobubanzi obuyi-intshi ezingama-26.
Into yokuqala ebonakalayo kukuba yimoto yezemidlalo kodwa ineengcango ezi-4. Ngale ndlela, abakhweli baqinisekiswa ngokungena ngokulula. Nje ukuba ungene ngaphakathi, amawaka aluvo avule yonke into; iAudi Aicon iyakwamkela abahlali bayo. Ukujonga ngapha nangapha, zonke izinto zilahlekile. Ngoku, umkhweli uya kuba nemingxunya eyahlukeneyo yokushiya nayiphi na into, ukongeza ekubeni nezihlalo ezikhululekileyo kunye neergonomic. Kwiziko lekhonkco esiya kuba nalo Iscreen sokuchukumisa uninzi apho ukuzonwabisa kunye nonxibelelwano kuya kugxilwa; Ikamva lokuqhuba kukonwabela uhambo ngendlela eyahlukileyo.
Ngeli xesha, kwicala lobuchwephesha, iAudi Aicon ineemoto zombane ezine. Ngokudibeneyo banikezela ngamandla angama-260 kW (aguqulelweyo aya kuba yi-353,6 CV yamandla). Kule nto kongezwa i I-torque ye-550 Nm. Ke ngoko, nokuba ngumbane kuphela, imvakalelo yokutyhala iya kuba nomtsalane ngokwenene. Ngokutsho kwenkampani ngokwayo, isithuthi sinokugcina uhambo ngesikhephe ngesantya esiqhubekayo se-130 km / h. Ngoku, enye into esingenakuphuncula kuyo yile esi sithuthi sinelona nqanaba liphezulu lokuqhuba ngokuzimela: kwinqanaba 5.
Kunika umdla ukukuxelela ukuba indawo yokugcina - ewe, ngokuchanekileyo, isiqu sayo - sahlulwe sangamacandelo amabini: ngaphambili nangasemva. Indawo iyonke ziilitha ezingama-660. Inxalenye ebaluleke kakhulu yeprojekthi kukuzimela kweAudi Aicon. Kwityala elinye Iyakwazi ukufikelela phakathi kweekhilomitha ezingama-700-800 uhambo. Inkqubo yokutshaja ngokungeniswa iya kufumaneka (akukho zixhobo) kwaye ngenkqubo yokutshaja ye-800-volt, i-80% yentlawulo inokufikelelwa kwimizuzu engama-30. Ewe kunjalo, sukulindela ixabiso okanye umhla wokukhutshwa; le yingcinga nje. Ngoku, isinika imikhombandlela malunga nokuba icandelo kunye neenkampani zonke zijolise njani kwinkqubo ezimeleyo neyombane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Audi Aicon, enye indlela yokuzimela yeJamani ene-800 km yokuzimela
Akukho nqanaba 6 ... akukho nqanaba 5 le 6. Kukho amanqanaba ama-5 okuzenzekelayo ukusuka ku-1 ukuya ku-5, kwaye le-Audi yeyona iphezulu, 5. Oko kuthetha ukuba ayisebenzisi i-pedals okanye ivili lokuqhuba kuba iyazimela kwaye ayimfuneko akukho xesha apho umsebenzisi angenelela. Inqanaba 0 leemoto ngaphandle kolunye uhlobo lokuzenzekelayo ... iimoto eziqhelekileyo ... yiyo loo nto impazamo yokucinga ukuba kukho amanqanaba ama-6 okuzenzekelayo. Ndiyaphinda ndizi 5 kuphela kwaye lemoto ino 5. Ndibulisile.
URuben inyongo sitsho
Ngokuchanekileyo, uRenato. Ngenxa yam. Enkosi ngokulungiswa.